Incazelo hhotela. A ehhotela elikhulu lesimanje Amathathu Amakhona Palmyra Amar el Zaman 4 Awukude kolwandle, eduze coves elincane kodwa olunothile kakhulu enamadwala. Lapha, izivakashi uphiwa izimo zokuphila ezingcono futhi eziningi amathuba ukuze ujabule. Ngaphezu kwalokho, izivakashi bangabheka phambili ukwamukelwa lwangempela futhi professional, service nobungane.
Okokuqala kuyafaneleka ukuthi ihhotela Amathathu Amakhona Palmyra Amar el Zaman Yakhiwa muva nje, okungukuthi ngo-2005. Anakho nsimu yabo enkulukazi, ihlobe wamasundu le izingoma izitshalo exotic Ornamental futhi izindlela ukuhamba. izakhiwo zokuhlala elakhiwa ngo isitayela elula kodwa nenhle asempumalanga. Coming lapha, izivakashi ngempela bazizwe amahle aseMpumalanga inganekwane nezinhlamvu.
Ihhotela Amathathu Amakhona Palmyra Amar el Zaman 4 ukusuka esikhumulweni sezindiza zamazwe ngamazwe emihlanu kuphela, ngakho izinkinga uhambo ngeke kwenzeke.
Guestrooms. Ihhotela mikhulu futhi linikeza izivakashi isheke kwelinye 174 amakamelo. Kukhona amakamelo ejwayelekile, yakhelwe ukuze kuhlale omunye noma abantu eziningana kanye amakamelo umndeni ehlangana, isigaba "Suites" ehhotela.
Kufanele kuqashelwe ukuthi igumbi ngalinye likwazi ukufinyelela kuvulandi ivulekile noma ithala, lapho ungajabulela kolwandle futhi izintaba enamadwala, ukubukela ukuphila ophithizelayo wechibi. Zonke amakamelo ahlotshiswe isitayela elula. It unikeza izibuya ngobumba, ifenisha ukhululekile wenza emahlathini ezibizayo futhi, yebo, nezinto ezidingekayo. Ikakhulukazi, egumbini uzothola TV ezokwenza ukuba ukwazi ukulubuka eziteshini eziyizintandokazi zakho kanye nokuphepha idiphozi ibhokisi, ngocingo, air conditioning ne mini-bar ne esiqandisini encane.
Yiqiniso, kukhona ehlukile, yokugezela kahle esikhulu, lapho izivakashi kungaba ushawa noma uphumule ashisayo okugeza olunephunga elimnandi.
Izintombi zasemizini ukuhlanza amakamelo nsuku zonke. New amathawula, bathrobes futhi amashidi zinikelwa yimikhaya zonke izinsuku ezimbili noma ngesicelo.
Amandla. Ihhotela Amathathu Amakhona Palmyra Amar el Zaman 4 usebenza ku-"zonke okufakayo". Lapha, izivakashi uphiwa kwasekuseni, kwasemini kanye dinner, futhi ngosuku kuzivakashi inkonzo kulo - ocebile "lezitsha" nge izithelo ezisanda kukhiwa, ukudla okulula, ezinye izitsha bendabuko Oriental, kanye neziphuzo. Kusukela phakathi kwamabili kuze eziyisikhombisa sandwich ekuseni izithelo kungaba inikelwe ngqo egumbini.
Yiqiniso, kule eziyinkimbinkimbi ehhotela kukhona zokudlela "Haute Cuisine", lapho ungakwazi ukujabulela ngokugcwele ukudla enkulu futhi furnishings. Ungakhetha noma yiliphi lokuphekiwe amahlanu endawo, kodwa kuyafaneleka ukucabangela ukuthi udinga eceleni itafula kusengaphambili. Kukhona futhi imigoqo eziningana, lapho njalo izophathwa ngokukhulu iziphuzo engcono, kuhlanganise iwayini, ubhiya asanda yasentabeni, cocktail yasekuqaleni futhi inemibalabala, walungisa ngokusho zokupheka zendawo zendabuko.
Futhi-ke, ogwini ziningi zokudla ezincane ukudoba, emathaveni amathilomu lapho ungakwazi adle bejabulela umsindo amagagasi, nezindawo ezinhle futhi ilanga efudumele.
Beach. Insimu Amathathu Amakhona Palmyra Amar el Zaman 4 engena okunethezeka yesihlabathi coral lolwandle, lapho imigqa Lihle ilanga loungers kanye baphathe nezambulela. Lapha ungathola lolwandle amathawula. Izivakashi zikhangwa nje abhukudayo bethamele ilanga, kodwa futhi ngoba amanzi ezemidlalo, kuhlanganise yesikebhe futhi catamarans. Ngaphezu kwalokho, ungaya-scuba diving, njengoba kukhona izifundo ezikhethekile. Lapha ungakwazi ukuqasha emaphikweni, imaski futhi imishini diving.
amasevisi engeziwe. Yiqiniso, konke lokhu eziyinkimbinkimbi ehhotela kuyahlangabezana nezindinganiso zamazwe ngamazwe bese yakhelwe ukuze siqinisekise esiphezulu yokuphumula induduzo lula. Lapha, ilondolo futhi omile yokuhlanza service, ikamelo umhlangano amancane iphuzu ukunakekelwa. Kukhona futhi izitolo eziningana esikhulu isikhumbuzo esitolo. Ungasebenzisa yokupaka izimoto. By the way, ihhotela unethuba ukuqasha isithuthuthu, ibhayisikili noma imoto.
Phakathi ukuhlala kule ehhotela, ungakwazi ngcono ezempilo kanye ukufunda okuthile okusha. Okokuqala kuyafaneleka ukuthi kukhona amachibi ezimbili omkhulu esabalala ne izambulela futhi ukhululekile ilanga loungers. Ungase futhi ube khona izifundo aerobics nobungqabavu, ukufunda esiswini ukudansa, amabhiliyade. Kukhona futhi amanzi yokuzijwayeza amakilasi, eqhutshwa omunye amachibi. Futhi-ke, ihhotela has iqembu ayo Animators abahlakaniphe kakhulu ukuthi cishe sonke isikhathi ukubungaza izivakashi, ahlele imincintiswano futhi imincintiswano, uhlele elikhanyayo, lokwentiwako agqamile bedansa.
Ezinganeni kukhona ehlukile pool, clubhouse, ebaleni lokudlala, mini-disco, kanye esihle amaslayidi amanzi. Kukhona ongumhlengikazi umnakekela lenhle kakhulu yekutsi bantfwana.
Izibuyekezo. abahambi abaningi bakwamanye amazwe Ukhetha ncamashi ipharadesi Ihhotela Amathathu Amakhona Palmyra Amar el Zaman 4. Izimpendulo ngaye cishe omuhle ngokuphelele. Izivakashi ukudumisa endaweni ezihlotshiswe kahle, ukudla okwehla esiphundu futhi ezihlukahlukene futhi, yebo, amakamelo ukhululekile ngempela. Abazali izanelise ngokuthi izingane kube yinto, futhi izivakashi kulencane nje kwamjabulisa ezihlukahlukene ezifana lokuzijabulisa. Izivakashi bakwazisa ngempela lula nenduduzo zaleli hhotela, ngakho iningi izivakashi ngokushesha baba Ezivamile.
Ihhotela "Kerch". Popular Ihhotela (Kerch)
Vera Seagate kuyona 5 * (Turkey, Belek) Ihhotela: ukubuyekezwa, izincazelo, izithombe
Njengoba iPhone ishintshile ezimpilweni zethu nothando
Kusho ukuthini yegilo indlala ezingabantu?